धेरै पनि प’र्दैन दै’निक आधा घ’ण्टा पैदल हिँ’ड्दा स्वा’स्थ्य लाभ
रोचक धेरै पनि प’र्दैन दै’निक आधा घ’ण्टा पैदल हिँ’ड्दा स्वा’स्थ्य लाभ
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: को’रोना सं’क्रमणको कारण अहिले सा’र्वजनिक यातायात सु’रक्षित छैन । भि’डभाड हुने सार्वजनिक यातायातभित्र भौतिक दूरी कायम राख्न पनि संभव हुँदैन ।
यस्तो बेला धेरैको निम्ति सजिलो विकल्प बनेको छ, पैदल हिँड्नु । खासगरी नजिकका गन्तव्यसम्म आउजाउ गर्नका लागि पैदल हिँड्नु नै सर्वोत्तम उपाय हो । यसले क्षणिक रुपमा हामीलाई को’रोनाबाट सु’रक्षित राख्ने मात्र होइन, दी’र्घकालिन रुपमा स्वा’स्थ्य लाभ पनि मिल्छ । तर, अहिले हामी धेरै सुख सुविधा खोज्न थालेका छौं ।
पाँच मिनेटको गन्तव्यसम्म पुग्न पनि गाडी चढ्नुपर्ने बानी भइसकेको छ । कतिपयलाई त हिँड्नै जाँगर चल्दैन । सागसब्जी किन्नदेखि सामान्य कामकाजका लागि घरबाट निस्कनसाथ गाडी चढ्ने बानी परेका हामी अहिले रो’गी बन्दैछौं ।
एकातिर ऐशआरमपूर्ण जीवन, अर्कोतिर ख’राब खानपान । जीवनशैलीकै कारण उच्च र’क्तचाप, म’धुमेहदेखि क्या’न्सरसम्मका रो’गहरुले गाँज्न थालेको छ । यस्तो स्थितिमा पै’दल हिँड्नु एक सर्वोत्तम विकल्प हुनसक्छ, जसले सं’भावित रो’गको भ’यबाट हामीलाई बचाउँछ ।
दैनिक केहि समय पैदल हिँडेर हामीले आफ्नो तौ’ल मात्रै घटाउन सक्ने होइन मां’सपेसीलाई पनि मजबुत बनाउन सक्छौं । ह’ड्डीहरु र जो’र्नीहरुलाई म’जबुत बनाउन सकिन्छ । साथै विहानविहानै हिँड्नाले बेचैनी र त’नाव कम हुन्छ डि’प्रेशनबाट मुक्त हुन पनि सहयोग पुग्छ । नियमित रुपमा दैनिक २० देखि ३० मिनेटको पैदलयात्राले मृ’त्युको ख’तरा २० प्रतिशत सम्म कम हुन सक्छ । यसको लागि तपाईंलाई दिनभर जिममा प’सिना बगाउने आवश्यकता पनि पर्दैन ।
एक नयाँ अध्ययनबाट हरेक दिन औसत २२ मिनेटमात्रै पै’दल हिँडेर मानिसले आफ्नो स्वा’स्थ्यमा धेरै सुधार गर्न सक्ने खुलासा भएको छ । ‘अमेरिकन जर्नल अफ प्रिभेन्टिभ मेडिसिन’मा छापिएको यो अध्ययनको नतिजा अनुसार जो मानिस हरेक दिन कम्तिमा पनि २० देखि २० मिनेट हिँड्छन् उनीहरुलाई नियमित हिँड्न अ’ल्छी गर्ने मानिसहरुलाई भन्दा मृ’त्युको ख’तरा २० प्रतिशत कम हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोला।
यो पनि पढ्नुहोस्। रा’तको खाना कतिबेला ? उचित खानपान तालिका अनुसार रा’ती अ’बेर खाना खानु उपयुक्त हुँदैन । जतिसक्दो चा’डो खाना खानुपर्छ ।
के भनाई छ भने, सू’र्योअस्त पछिको खानेकुरा वि’ष समान हुन्छ । अ’र्थात सूर्यो’अस्तपछि हामी जुन खानेकुरा सेवन गर्छौं, त्यो शरी’रका लागि आ’वश्यक हुँदैन । शरी’रमा अनावश्यक खानेकुरा पुग्छ । अना’वश्यक खा’नेकुरा पुग्नु भनेको शरी’रलाई ड’स्बिन जस्तै बनाउनु हो ।
जब हामी आफ्नो पे’टलाई ड’स्बिन बनाउँछौं भने श’रीर कसरी नि’रोगी हुन्छ । त्यसैले सं’भव भएसम्म चाडै खाना खानुपर्छ । साँ’झ सूर्योअस्तअघि नै खाना खानु उत्तम । कतिपय अवस्थामा चाहि यस्तो तालिका मिलाउन संभव हुँदैन । औ’षधी सेवन गरिरहेको अ’वस्थामा, रो’ग लागेको अव’स्थामा, कामको चाप भएको अवस्था’मा, रा’त्रीकालिन काम गर्नुपर्ने अव’स्थामा । त्यसैले आफ्नो अनु’कुलता पनि हेर्नुपर्छ ।
यद्य’पी रा’ती सुत्नुभन्दा दुई वा तीन घण्टा अघि खाना खानु उत्तम हो । रा’तको खाना कति ? एउटा प्रशिद्ध उखान छ, बि’हानको खाना आफु खानु, दिउँसोको साथीसँग बाँ’डेर खानु, रा’तको खाना स’त्रुलाई दिनु । यसको अर्थ बि’हानको खाना जति से’वन गरिन्छ, त्यसपछि खानाको मात्रा कम गर्दै जानुपर्छ ।
सकेसम्म रा’तको खाना कम खाएकै वेश हुन्छ । बिहान भरपे’ट खाना खानुपर्छ । त्यही खानाले हामीलाई दिनभरको लागि उर्जा दिन्छ । त्यसपछि क्रमस खानेकुराको मात्रा घ’टाउनुपर्छ । रा’तीको खाना सकेसम्म हल्का वा सजिलै पच्ने किसिमको हुनुपर्छ । रा’तको खाना चाडै खाएमा के लाभ हुन्छ ?
रा’तको खाना चाडै र हल्का खाएमा अना’वश्यक तौल बढ्दैन । वा तौ’ल नियन्त्रण हुन्छ । गहिरो नि’द्रा लाग्छ । बिहान उठ्दा श’रीर ह’ल्का महसुष हुन्छ । पे’ट भा’री हुँदैन । यसले मु’टुमा पनि स’कारात्मक प्रभाव पार्छ । फ्या’ट र को’लोस्टोरको स’मस्या कम हुन्छ । पे’ट स’म्बन्धीका स’मस्याहरु हट्छ ।
आजदेखि कोरोना बिमा गर्नेको मात्रै नि:शुल्क उपचार गर्ने सरकारको निर्णय
जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कोरोना बिमा गरेका कर्मचारीहरुको मात्रै सरकारले नि:शुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।